Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble oo qarka u saaran in xilka laga qaado – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble oo qarka u saaran in xilka laga qaado
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa la sheegayaa inuu haatan wajahayo ololihii ugu weynaa ee lagu doonayo ee xilka looga qaado, kadib muddo sanad ka yar oo uu xilkaasi haayay.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeele ayaa la sheegayaa inay magaalada Jowhar haatan ku diyaarinayaan mooshin ka dhan ah madaxweyne Cali C/laahi Cosoble, kaasoo saxiixiisa uu haatan mid gabo-gabo ah maraya.
Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble oo dhowr jeer hore ka bad-baaday mooshino xilka looga tuuri lahaa ayaa lagu eedeyay waxqabad la’aan iyo inuusan wax horumar ah kusoo kordhin maamulka uu hoggaanka u yahay.
Sidoo kale, waxaa madaxweyne Cali C/laahi Cosoble lagu eedeeyay inuu magaalada Muqdisho ka dhigtay xarunta uu ka maamulo maamulka Hirshabeele, isagoona sidoo kale magacaabay 7 degmo cusub, taas oo xiisadda sii kicisay.
Dhinaca kale, magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho waxaa haatan ka socdo shirar kala duwan oo lagu doonayo in kursiga looga tuuro madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Tirada xildhibaan ee haatan mooshinka ka diyaarinaya madaxweyne Cali C/laahi Cosoble ayaa la sheegayaa inay gaarayaan ku dhawaad 50 xildhibaan.